Dhimashada Ay Sababtay Dabaysha Typhoon-ka Bopha ee ku dhufatay dalka Philippine oo sii korortay | Ilwareed.com Isha wararka iyo warbixinada Somalida oo dhan, iyo dhacdooyinka caalamka
Dhimashada Ay Sababtay Dabaysha Typhoon-ka Bopha ee ku dhufatay dalka Philippine oo sii korortay
Posted By ilwareed on Wednesday, December 5th 2012 14:36 EAT
Wararka ka imaanaya dalka Philippine ayaa sheegaya in tirada dadka ku dhintay dabayshaasi Bopha ee ku dhufatay koonfurta Philippine ay gaartay 43 qof oo qaarkood ay ku dumeen guryo ay gabaad ka dhigteen.
Dabaysha ayaa wadatay roobab xoogan oo dhaliyay daadad kuwaasi oo wali qasaaraha ay gaysanayaan ay kasii socdaan koonfurta dalka Philippine.
Dabaysha Typhoonka ee Bopha ayaa saamayn xun ku yeelatay dad badan oo ku sugnaa Jasiirada Mindanao ee dalkaasi, iyadoo kumanaan dad ah ay kooxaha gurmadka degdega ah samatabixiyeen.
Gobolka bariga ee Jasiirada Mindanao ee Davao Oriental ayaa la sheegayaa inay sidoo kale daadadkaasi saameeyeen iyadoo tirada dhimashadana ay u dhaxayso 30 ilaa iyo 50 ruux.
Dabaysha ayaa haatan u gudubtay dhinaca galbeedka dalkaas Jasiirada ku taala ee Palawan, halkasi oo dad aad u badan ay ka cabsi qabaan inay saamayn ku yeelato waxaana dadka looga digayaa inay feejignaadaan.
Dadka waxyeelada ugu badan ay soo gaartay ayaa ah dadkii deegaanka Andap ee gobolka Bataan halkaasi oo dadka inta badan ay waxyeeladu ka soo gaartay daadadka ku dhuftay.
Militeriga dalka ayaa rajaynaya inay dadka ku go,doonsan goobaha ay xanibeen daadadka iyo burburka kale ee guryaha iyo wadooyinka dalkaasi ay u diri doonaan diyaaradaha qumaatiga u kaca, si dadka u soo badbaadiyaan.